ने.कां. महाधिवेशनः सबैको ध्यान महामन्त्रीमा को–को छन् आकांक्षी ? - RoadMapNews
RoadMap News	प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ०७, २०७८ समय: ७:१८:५४
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले गत भदौ ११ गते महाधिवेशनमा आफू सभापति पदको उम्मेदवार हुने औपचारिक घोषणा गरे । पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि मिडियामार्फत आफू सभापतिको प्रत्याशी बन्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भदौ २४ मा महामन्त्री पदको उम्मेखदवारी घोषणा गरे । त्यसअघि केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका थिए । कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि अनौपचारिक रुपमा आ–उम्मेदवारीबारे बोल्ने क्रम सुरु भएको छ भने कतिपय नेताहरु अझै उपयुक्त समयको पखाईमा छन् ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सो पार्टीको महामन्त्री बन्नेहरुको ताँती नै लागेको छ । सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको दावी महामन्त्रीमा छ । देउवाका विश्वासपात्र एवं सुदुरपश्चिमका नेता एनपी साउद पनि महामन्त्रीका दावेदार हुन् । खाँड गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहेकोले महामन्त्रीमा ‘विकल्प खोज्न’ देउवालाई दवाव छ । त्यस्तो अवस्थामा साउद देउवाको महामन्त्री हुनसक्छन् । यद्यपि सुदुरपश्चिमकै रमेश लेखकको पनि दावी महामन्त्रीमा छ ।
यसैबीच राप्रपाबाट कांग्रेसमा आएका सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापा पनि महामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । देउवा टिमबाट महामन्त्रीमा ‘सेट’ हुन थापाको प्रयास जारी छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि देउवा टिमकै महामन्त्री उम्मेदवार हुन् । यद्यपि एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गरेको र उपसभापति निधिसँग जोडिएका कारण शर्मालाई सहज भने हुने छैन ।
त्यसो त सभापति देउवानिकट नेताहरु महाधिवेशनको संघारमै पुगेर मात्रै प्यानलबारे तय हुने बताउँछन् । समूहका नेताहरुले आ–आफ्नो तयारी गरेपनि प्यानल निर्माणमा देउवाको भित्री इच्छा जे हुन्छ, त्यही कुरा निर्णायक हुने उनीहरुको भनाई छ । त्यसो त सभापतिमा दोहोरिन चाहेका देउवाका लागि आफ्नो महामन्त्रीको उम्मेदवार छान्न सबैभन्दा सकस हुने देखिन्छ । देउवा टिममा दशकौ सक्रियदेखि नवप्रवेशीसम्मले महामन्त्रीमा दावी गरिरहेका छन् ।